नयाँ शक्तिप्रति जापानमा बढ्दो अकर्षण – Akhabar Dainik
नयाँ शक्तिप्रति जापानमा बढ्दो अकर्षण
काठमाडौं। असोज १२ । याँ शक्ति पार्टी, नेपालको भातृ संगठन अन्तरराष्ट्रिय नेपाली समाज जापानको बिस्तार तिब्र रुपमा भइरहेको छ । जापानमा नयाँ शक्ति पार्टीप्रति आकर्षण बढ्दो छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईले यहि सेप्टेम्बर १८ मा जापानमा बुद्धिजीबीहरुको समुहमा सम्बोधन गरेपश्चात यहाँका नेपाली समुहमा व्यापक प्रभाव परेको छ ।
यसै क्रममा आज ओशाकामा निवर्तमान संयोजक जीवन अंगाइको सभापतित्व तथा प्रादेशिक परिषद् भरत सिंह नेगीको आतिथ्यतामा भएको क्षेत्रीय भेलाले १५ सदस्यीय कान्साइ क्युशु क्षेत्रीय समिती गठन गरेको छ ।
भेलाले नर नारायण कँडेलको संयोजकत्व तथा खिम खरेल (बिष्णु ) को सह संयोकत्वमा क्षेत्रीय समिति समेत चयन गरेको छ । समितिको सदस्यहरुमा अनिल पौडेल, केशरी धमला, रन्जु लामिछने हरी राम खड्का, सत्येन्द्र गुप्ता, हेम लाल गौतम, सरु भट्टरार्ई, अरुण कुमार ठाकुर र जीवन सापकोटालाई सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी अन्य सदस्यहरुमा बालकृष्ण सापकोटा, रामु पौडेल, जय लाल सापकोटा, मान बहादुर केसी रहेका छन् ।
उक्त भेलाले चार सदस्यीय उत्पादन तथा रोजगार प्रबद्धृन प्राविधिक समिति पनि गठन गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय नेपाली समाज जापानका संयोजकको सल्लाह र क्युशु कान्साई क्षेत्रीय समितिको सिफारिस अनुसार यस समितिमा जीबन अंगाइ, डा. बिनोद बहादुर श्रेष्ठ, प्रकाश चन्द्र सापकोटा र भरत सिंह नेगी चयन भएका छन् ।
यो समितिमा जापानमा विभिन्न क्षेत्रमा विद्यावारिधी गरिसकेका र गरिरहेका व्यक्तिहरु रहेका छन् । यस समितिको संयोजकमा जीबन अंगाइ रहेका छन् । समिती मार्फत जापान तथा अन्य राष्ट्रबाट पुँजी परिचालन गरी उत्पादन तथा रोजगार फण्ड सञ्चालन गरिने भएको छ । यस फन्डलाई न्यून लागत तथा प्रतिष्पर्धी सिद्धान्तमा आधारित रहेर नेपाल भित्रै उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गरी बृहत आर्थिक समृद्धी योगदान दिनेगरी उपयोग गर्ने जनाइएको छ ।}